उपत्येकामै १ लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित - Rastrakokhabar
पछिल्लो समाचार, विविध, स्वास्थ्य
केही महिनादेखि जाँचिएका नमुनामा ठूलो दरमा सङ्क्रमण देखिँदै आएको छ। यसप्रति जनस्वास्थ्यविद्‌हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रवार परीक्षणको लगभग १९ प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको छ, काठमाण्डू उपत्यकामा सर्वाधिक परीक्षण गरिने र सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अहिले जारी छ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार नजिक पुगेको छ। तीमध्ये एक लाखभन्दा बढी काठमाण्डू उपत्यकामा फेला परेका हुन्। अहिले पुष्टि भएका २४,६६५ जना सक्रिय सङ्क्रमित देशभरि छन्।सरकारको तथ्याङ्कअनुसार शुक्रवारसम्म नेपालमा १,२९८ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ।
मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको विवरणमा २४ घण्टाको अवधिमा थप ५,३६४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कुल एक लाख ९१ हजार निको भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सङ्क्रमितहरू निको हुने दर ८८ प्रतिशत छ। गत कार्तिक ५ गते सर्वाधिक ५,७४३ जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए।
सङ्क्रमितमध्ये ७४० जना महिला र १,२०५ पुरुष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये काठमाण्डूमा ८६२ जनासहित उपत्यकाका १,१०७ जना छन्।
अहिले उपत्यकाका तीन जिल्लामा १२,६९२ सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएका मानिसको सङ्ख्या एक लाख आठ सय ७२ पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि १९,०१४ सङ्क्रमित घरमै र बाँकी संस्थागत आइसोलेशनमा छन्।उपत्यकामा अहिले देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ५१ प्रतिशत भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशभरि अस्पतालमा भएका सङ्क्रमितमध्ये ४०३ जना सघन उपचार कक्षमा र ६३ जना भेन्टिलेरमा छन्।
Previous Post	घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति?
Next Post	शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा आगलागी
काठमाडौँमा कोरोना परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा पुष्टि
आइतबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १८:१८
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १८:०५